Antalaha-Maroantsetra : ahina nisy andramena tafavoaka | NewsMada
Antalaha-Maroantsetra : ahina nisy andramena tafavoaka
Taorian’ilay sambo malezianina tratran’ny tompon’andraikitra maorisianina saingy tsy nahitana andramena tao anatiny, fantatra indray ny loharanom-baovao milaza fa mety nisy andramena tafavoaka nentin’ny sambo hafa teo anelanelan’Antalaha sy Maroantsetra. Voalaza koa fa nisy mihitsy fifampitifirana.
Miverina ny trafika? Raha nangingina ny trafika andramena ny taona 2016, ahina miverina indray izany ankehitriny. Araka ny loharanom-baovao, nisy sambo madinika roa nihaodihaody teny amorontsiraka, teo anelanelan’Antalaha sy Maroantsetra, ny tapaky ny volana janoary teo ary sambo vahiny lehibe fahatelo teny afovoan-dranomasina. Nandeha ny ahiahy fa an’ny mpandraharaha roa (Bes… sy Bem…) any an-toerana ireo sambo madinika roa ireo. Voalaza fa nisy nahenoana poa-basy tsy lavitra an’ilay toerana, saingy tsy voamarina mazava ireo nifampitifitra ary nahitana diana hazo maromaro teo amoron-dranomasina, ahina ho andramena vao avy naondrana tany anaty sambo. Hatreto tsy nahenoana fanamarinana mikasika ity loharanom-baovao ity ny tompon’andraikitra sy ny mpitandro filaminana.
Efa nahoraka ny filazana fa mety hiverina indray ny trafika andramena ato ho atao. Nahina nitondra andramena ilay sambo malezianina ny fiandohan’ny janoary teo, niditra taty amin’ny fari-dranomasin’i Madagasikara, nefa tsy nahazo alalana raha ny sary azo avy any amin’ny zanabolana. Tratran’ny tompon’andraikitra maorisianina saingy tsy nahitana andramena tao anatiny. Na izany aza, tsy afaka ny ahiahy, indrindra mety maro ireo mpanao trafika miandry ny valin-teny ofisialy avy any amin’ny Cites, mikasika ny fahafahan’i Madagasikara manondrana na vao mainka hihamafy ny sazy mandrara.